जब उनी प्रधानमन्त्री भए, अधिकांश नेपालीले धेरै राम्रा कुराहरुको अपेक्षा उनीबाट गरे । आफूले नि खुबै वकालत गरियो, भ्याएजति ठाउँमा । मुस्ताङ गाडि चढ्ने देखि, ‘इकोनोमि क्लास’को हवाइ टिकटले उनको कद बढाउन मद्दत गर्यो । उनको सुरुवाती भनाइहरु, गरिएका भाषणहरु सुन्दा हेर्दा, उनलाई अविश्वास गर्ने ठाउँ कहिँ थिएन । अन्य राजनितिक दलहरुलाई पहिले देखि नै उनका कुरा नपचेको हुनसक्छ तर जनताको हिसाबले, हामीले हाम्रो ठाउँबाट हेर्दा बाराभले भनेका र गरेका हरेक कुराहरुलाई सकरात्मक अर्थमा हेरियो । हामी यो कारण पनि खुशी थियौँ कि, कम्तिमा यी प्रधानमन्त्री पहिलेका अरुजस्ता छैनन् । कोइराला, नेपाल, खनाल, दाहाल, आदि देखिसकेका हामीले भट्टराईबाट केही पृथक र केही राम्रा कामहरुको अपेक्षा राख्यौँ । तर आज सरकारको नेतृत्व गरेको करिब १ वर्ष हुँदै जाँदा उनी सबैतिर उनका अलोकप्रिय निर्णय र मिचाहा स्वभावका कारण आलोचित बन्दै गइरहेकाछन् ।
सत्तामा आफूलाई जोगाइराख्न, ईतिहासकै ठूलो मन्त्रीमण्डल बनाउने देखि लिएर संविधान भंग गर्ने सम्मका काम गरेबाट उनी आलोचित त भइरहेकाछन् नै, त्यसबाहेक अन्य विभिन्न दर्जनौँ निर्णयबाट पनि आफ्नो साख गुमाइरहेकाछन् । राजनितिक दलहरुले उनको कदमको आलोचना गर्नु पार्टिका स्वार्थ र अन्य राजनितिक कारण जोडिएका होलान् । जस्तो कि, भट्टराईको सरकारले गरेको हरेक निर्णयको आलोचना अन्य पार्टिहरुले गर्दै आएकाछन् तर भूतपूर्वलाई दिने सेवा सुविधा सम्बन्धि कुरामा अन्य दलका नेताहरुले चुँ सम्म गरेनन् । सबैकुरामा नाक’निक गर्दै आएका राष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि भूतपूर्वलाई दिने सेवा सुविधा सदर गरे । तर जनताको नजरबाट हेर्दा भूपूलाई दिने सेवा सुविधा पनि भट्टराईको अलोकप्रिय निर्णय हो। केलाउँदै जाने हो भने, उनको हरेक निर्णयमा खोट लगाउने ठाउँ भेटिन्छ । हिजो एक टेलिभिजनका लागि दिइएको अन्तरवार्ताको चर्चा अहिले भइरहेकोछ । दिलभुषण पाठकले ‘टफ टक’का लागि लिएको अन्तरवार्तामा प्रधानमन्त्री भट्टराईको असफलता प्रस्टै झल्किएकोछ । आफूले जनयुद्द सुरु गर्दा देउवा सरकार समक्ष तेर्स्याइएको ४० बुँदे मागलाई नै दिलभुषण पाठकले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई तेर्स्याएका थिए । सिस्टमलाई दोष दिँदै, अरुले काम गर्न दिएनन् भन्दै भट्टराईले उसबेला उठाएका ४० बुँदे मागका अधिकांश माग “प्रचार” को लागि मात्र थियो सम्म पनि भन्न भ्याए । आफ्नो असफलता ढाकछोप गर्दै, कुर्सीमै बसेर अघि बढ्ने मनस्थिति देखाएबाट उनलाई समर्थन गर्ने हामीहरु पनि मर्माहत भएका छौँ । सिस्टम’ले ठाउँमा पुगेपछि भन्या अनुसार काम गर्न पाइँदैन, कुरा सोह्रै आना सत्य हो । तर यति हुँदा हुँदै पनि सहमति र आपसी समझदारीमा अघि बढ्नुपर्ने बेलामा भट्टराई मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनिरहेकाछन् ।
बाँकी कुरा यो तलको भिडियो अन्तरवार्तामा हेर्नुहोस् !
PM Dr. Baburam Bhattarai in Tough Talk with Dil Bhusan Pathak:
२४ घन्टा भित्र सत्ताइस हजार भन्दा बढिपटक यो अन्तरवार्ता युट्युबमा हेरिसकिएकोछ । भट्टराईको अन्तरवार्ता लिने पत्रकार पाठकको फेसबुक वाल, बधाइ सन्देश’ले भरिएकोछ । दिलभुषण पाठकले आफ्नो फेसबुकमा लेखेकाथिए:
उनलाई मेरा प्रश्नहरु मन परेनन् । शायद ती अति खरा थिए...पुरा गर्न नसकेका आफैले बांडेका आश्वासनहरु सम्बन्धी नमिठा प्रश्नहरु । उसबेला तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आफैले बुझाएका ४० बुंदे माग आफै प्रधानमन्त्री भएपछि के भए भन्दा त उनलाई झनै रिस उठ्यो । ११ महिना अघि प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बन्दा दिएको राहतको आश्वासन त पुरा गर्न संभव नै छैन रे यो कार्यकालमा । त्यसका लागि फेरी प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ रे बाबुराम भट्टराईलाई । त्यसै भने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मलाई आजको टफ टकमा । झुठ बोल्नु उनीहरुको समस्या होइन, उनीहरुको झुठ संधै स्विकार्नु हाम्रो रोग हो ।
बाँकी कुरा आफैँ भिडियो हेरेर बुझ्नुहोला । ४५ मिनेट लामो अन्तरवार्ताका क्रममा भट्टराईको असफलता र असहजता प्रस्ट देखिन्छ । तर पनि भन्न छोडेकाछैनन् बाराभलाई काम गर्न देउ !
Anup Panthi August 25, 2012 at 11:36 AM
यिनी नराम्रो संग फसे,
कम्निस्ट हरुले कुनै जवाफ दिन सकेनन भने एउटा जवाफ दिन्छन "यो कुरा को मुल्यांकन इतिहास ले गर्ने छ, जनता ले सबै बुजेका छन्"